मोरङबाट आयो सबैकाे मन रूवाउने दुःखद खबर : पुरै गाउँ शो’कमा – Sandesh Press
June 23, 2021 290
विराटनगर / मोरङमा भएको दु’र्घ’टनामा परेर कांग्रेस धनकुटाका सचिवसहित दुई जनाको आइतबार राति मृ’त्यु भएको छ । पूर्व–पश्चिम लोकमार्गमा पर्ने सुन्दरहरैँचा नगरपालिका–९ विराटचोकमा भएको दु’र्घ’टनामा एक जना बैंकका कर्मचारीको पनि मृ’त्यु भएको छ । पश्चिमबाट पूर्वतर्फ जाँदै गरेको नम्बर नखुलेको टिपरका कारण दु’र्घ’टना भएको प्रहरीको भनाइ छ ।
दु’र्घ’टनामा परेर को ३६ प ५९७९ नम्बरको मोटरसाइकलका चालक धनकुटाको पाख्रीबास नगरपालिका–७ का ४६ वर्षीय कृष्णबहादुर थापाको मृ’त्यु भएको छ । त्यस्तै दु’र्घ’टनामा को २९ प ९५५० नम्बरको मोटरसाइकलका चालक सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिका–४ का ३१ वर्षीय दीपु साहको पनि मृ’त्यु भएको एसपी शर्माले बताए ।
सबिता भण्डारीको घरको नालीबेली यस्तो
ससुराले बुहारीको गो प्य अ ङ्ग मा छुने जस्ता नराम्रा हर्कत गरेका भिडियोहरु एकाएक मिडियामा आएपछि अहिले माहोल तातिएको छ । परिवार भित्रै असुरक्षित बनेका छन नेपालमा महिलाहरु भन्दै धेरैले यस घटनाको वि रो ध गरेका छन् । आफ्नै बुहारीमाथि कु दृष्टि लगाउने ससुरालाई देशव्यापी रुपमा क डा का र बा हीको माग भइरहेको छ ।
बुहारीलाई ससुराले छोरीको रुपमा हेर्नुपर्ने तर आफ्नै छोरी समान बुहारीलाई पटकपटक दु र्व्य वहार ग रे पछि सहन नसकेर यस्तो भएकाे भन्ने अ ड्क ल पनि धेरैले गरेका छन । यही बिषयमा धेरै ब्यक्तीहरुले आफ्नो धारणा राखेका छन यही क्रममा प्रखर बक्ता आनन्द राम पौडेलले पनि आफ्नो बिचार राखेका छन ।
Prevकतार प्रहरीमा नेपालीको लागि बाटो खुल्यो ! कसरी जाने, कती हुन्छ तलब ? थाहा पाउनुहोस्
Nextअसार १७ गतेदेखि आन्तरिक उडान खुला, अन्तर्राष्ट्रिय उडान भोलिबाटै खोल्ने निर्णय
पल शाहलाई पक्राउ गर्दै प्रहरी ! प्रहरी भन्छ, ‘जाहेरी दर्ता भइसकेकाले अब पल शाहलाई पक्राउको तयारी गरिएको छ,
यस्ता छन् महिलामा देखिने क्यान्सरका लक्षण, यी संकेत देखिए रहनुहोस् सावधान